यी निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ वाम गठबन्धनसँग हार्न सक्छन्, कांग्रेसका शीर्ष नेता – Famous Nepal
Posted on November 17, 2017 at 12:07 pm by फ्यामोस नेपाल
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन नै निर्माण गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएका छन् भने राप्रपा र नयाँ शक्ति नेपाललाई समेटेर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ । त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा यी दुईमध्ये कुन गठबन्धनले बढी सीट जित्ला भन्ने चासो सवत्र छ । नेताहरुले पनि विगतका निर्वाचनको नतिजालाई आधार मानेर निर्वाचनको जोड–घटाउ गरिरहेका छन् ।
विगतको मतलाई आधार मान्ने हो भने खासगरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको कांग्रेसका शीर्ष नेतालाई निकै अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । किनकी विगतका निर्वाचनलाई नै आधार मान्ने हो भने अधिकांश क्षेत्रमा एमाले र माओवादी कांग्रेसका प्रतिष्पर्धी थिए । अहिले उनीहरु गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदैछन् । त्यसैले पनि कांग्रेसका शीर्ष नेतालाई यो निर्वाचनमा जित निकाल्न फलामको चिउरा चपाएझैँ गार्हो हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनलाई आधार मानि गरिएको यो विश्लेषण हेर्नुहोस् प्रमुख दलका कुन नेतासँग कति मतदाता छन् र कसले कहाँ जित्ने सम्भावना छ ?
हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई नै आधार मान्दा पनि अबको निर्वाचनमा लोकतान्त्रीक गठबन्धन बनाएको नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतालाई जितका लागि निकै सकस पर्ने देखिन्छ । किनकि अहिले एमाले र माओवादी मिलेर चुनावमा जाँदैछन । त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गरी आफ्नो पक्षमा निर्वाचनको मत परिणाम पार्न कांग्रेसलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुने विश्लेषण भैरहेको छ । हेरौँ
यसअघिको प्रमुख दलले पाएको निर्वाचन मत परिणामको आधार मानेर गिएको यो विश्लेषण, आखिर कुन पार्टी कहाँ बलियो छ कहाँ कमजोर छ ?
के.पी. शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष
नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका के.पी.शर्मा ओली झापा ५ बाट उठ्दै छन् । झापा ५ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसको पक्षमा २३२५० र राप्रपाको पक्षमा १०२२५ रहेको छ जसमा कूल ३३४७५ रहेको छ भने, वाम गठबन्धनमा समेल रहेको नेकपा एमालेको २९४६० र माओवादी केन्द्रको १२६८३ गरी कूल ४२१४३ रहेको जहाँ वाम गठबन्धनले जित्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराबाट चुनाव लड्दैछन् । डडेल्धुरामा काँग्रेसको पक्षमा १९५२३ र राप्रपाको पक्षमा २६८ रहेको छ, जसमा कूल १९७९१ रहेको छ भने, एमालेको १६९१५ र माओवादी केन्द्रको १०९४५ गरी कूल २७८६० रहेको जहाँ वाम गठबन्धनको जितको सम्भावना देउवालाई मुख्या चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादी केन्द्र अध्यक्ष
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चितवन ३ बाट उठ्ने भएका छन् । चितवन ५ मा लोकतान्त्रीक गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसको पक्षमा २६९२३ र राप्रपाको पक्षमा ८३५२ रहेको छ जसमा कूल ३५२७५ रहेको छ भने, वाम गठबन्धनमा समेल रहेको नेकपा एमालेको २५७७७ र माओवादी केन्द्रको १८१३० गरी कूल ४३९०७ रहेको छ । यहाँ पनि वाम गठबन्धनले जित्न सक्छ ।
माधव कुमार नेपाल, एमाले नेता
नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल काठमाण्डौँ २ बाट निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । यहाँ पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ । काठमाण्डौँ २ मा विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत २०३८० रहेको छ, जसमा नेपाली काँग्रेसको १५५२७ र राप्रपाको ४८२३ रहेको छ । यता वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको १९१९६ र माओवादी केन्द्रको ५७३२ गरी कूल २४९२८ रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन नै अगाडी रहेको छ ।
झलनाथ खनाल, एमाले वरिष्ठ नेता
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलाम १ बाट निर्वाचनमा उम्मेद्वारी बन्ने भएका छन् । यहाँ पनि लोकतान्त्रीक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ । इलाम १ को विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत २४६१७ रहेको छ जसमा नेपाली काँग्रेसको २३५७८ र राप्रपाको १०३९ रहेको छ । वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको ३०१६५ र माओवादी केन्द्रको ५२२८ गरी कूल ३५३९३ रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई, नयाँ शक्त्री पार्टी संयोजक
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा निर्वाचन लड्ने भएका छन् । उनी गोरखा २ बाट उम्मेद्वार बनेका छन् । पछिल्लो पटक उनको राजनीतिक गठबन्धन फेरबदलको कारण यस पटकको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिन्छ । तर यहाँ समेत लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ । गोरखा २ को विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत २४२७२ रहेको छ जसमा नेपाली काँग्रेसको १६६६२ र नयाँ शक्तिको ७६१० रहेको छ । भने वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको ७५९२ र माओवादी केन्द्रको १७८४५ गरी कूल २५४३७ रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ १ बाट निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा छन् । यहाँ पनि लोकतान्त्रीक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन नै अगाडी रहेको छ । उनलाई त्यहाँबाट चुनाव नलड्न उनकै पार्टीका नेता गोविन्दराज जोशीले चेतावनी दिइरहेका छन् । यसअघि पनि तनहुँमा कांग्रेसलाई अन्तर्घात भएको थियो । यसपटक पनि आन्तरिक विवाद हल नगरी कांग्रेसले पौडेललाई निकट दिएमा पुनः त्यस्तै अन्तर्घात दाहोरिन सक्ने चर्चा कांग्रेस वृत्तमै चलिरहेको छ । अर्कोतिर स्थानीय तहको मतपरिणामलाई नै आधार मान्दा पनि तनहुँ १ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत २८८१२ रहेको छ जसमा नेपाली काँग्रेसको २८२५६ र राप्रपाको ५५६ रहेको छ । वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको २२११८ र माओवादी केन्द्रको ७१३० गरी कूल २९२४८ रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ ।
नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतम बर्दिया १ बाट निर्वाचनमा सहभागी हुने भएका छन् । यहाँ पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धन निकै नै अगाडि देखिन्छ । बर्दिया १ को विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत २६७६३ रहेको छ, जसमा नेपाली काँग्रेसको २३८५७ र राप्रपाको २९०६ रहेको छ । वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको ३१२९० र माओवादी केन्द्रको २४४५४ गरी कूल ५५७४४ रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन निकै मतले अगाडि रहेको छ ।
पशुपतिशमशेर राणा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) अध्यक्ष
पशुपतिशमशेर राणा सिन्धुपाल्चोक १ बाट निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । यहाँ पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ । सिन्धुपाल्चोक १ को विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत ३००१९ रहेको छ, जसमा नेपाली काँग्रेसको २१४८२ र राप्रपाको ८५३७ रहेको छ । भने वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको २६५७४ र माओवादी केन्द्रको १३८४० गरी कूल ४०४१४ रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ ।
डा. शशांक कोइराला, कांग्रेस महामन्त्री
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नवलपुर २ बाट निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । यहाँ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन वाम गठबन्धन भन्दा अगाडि रहेको छ । नवलपुर २ को विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत ३५०३० रहेको छ, जसमा नेपाली काँग्रेसको ३३३२२ र राप्रपाको १७०८ रहेको छ । भने वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको २९६्र०१ र माओवादी केन्द्रको ५००८ गरी कूल ३४६०९ रहेको छ जसमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि रहेको छ ।
कलम थापा , राप्रपा अध्यक्ष
यसपटकको निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा मकवानपुर १ बाट निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । यहाँ पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धन नै अगाडि छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कूल मत ३२१५० रहेको छ, जसमा नेपाली काँग्रेसको २२५५५ र राप्रपाको ९५९५ रहेको छ । वाम गठबन्धनमा रहेको एमालेको २५९९६ र माओवादी केन्द्रको १३८८४ गरी कूल ३९८८० रहेको छ जसमा वाम गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ ।
प्रकाशमान सिंह, कांग्रेस महामन्त्री
आगामी मंसिर १० मा हुने निर्वाचनको लागि प्रकाशमान सिंहले काठमाण्डौँ १ बाट निर्वाचन लड्ने भएका छन् । यहाँको विगतको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा वाम गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ । वाम गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेको पक्षमा ८७१४ मत रहेको छ भने माओवादी केन्द्रको पक्षमा १५४० गरी कूल १०९८८ रहेको छ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसको ८८५१ र राप्रपाको १५४० गरी कूल १०३९१ मत रहेको छ ।
राजविराज, २८ कात्तिक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी र राष्ट्रिय…